Warshada hilibka lo'da ee Tyson ee ku taal Dakota City ma furi doono sida la filayo Talaadada | KWIT
Warshada hilibka lo'da ee Tyson ee ku taal Dakota City ma furi doono sida la filayo Talaadada
By Halima Osman • May 4, 2020
Warshada hilibka lo'da ee Tyson ee ku taal Dakota City ma furi doono sida la filayo Talaadada.
Afayeen u diray Siouxland Public Media News qoraal galabtaan wuxuu leeyahay,
"Caafimaadka iyo badbaadada xubnaha kooxdeena ayaa ah ahmiyadeena koowaad, waxaana u qaadnaa mas'uuliyadaan si aad ah qatar ah. Waxaan sii wadnaa inaan ka shaqeyno sidii aan u habeyn laheyn tirada ugu badan ee baaritaanka tijaabada ah ee 4,300 xubnood ee kooxdayada ah, sidaa darteed waxaan go'aansanay inaan si ku meel gaar ah dib u dhigno dib u furitaanka xarunteena Dakota City.
Waxaan ogeysiineynaa xubnaha kooxda warbixinta warbixinada tilmaamaha shaqada ee ku saleysan natiijooyinka baaritaanka shaqsiyaadka iyo daryeelka waxaanna bixin doonaa cusbooneysiin dheeri ah oo ku saabsan waqtigeenna dib loo eegay waqti dhow. "
Bog Iowa ayaa laga furay magaalada Sioux City isniinta dadka deggan waqooyiga-galbeed Iowa. Ilaalada Qaranka ee Iowa ayaa dejisay goobta ay ku yaalliin jaamacadda Western Iowa Tech Community College. Kaliya dadka u qalma imtixaanka isla markaana ballanta ballan ka sameystay shabakada testiowa.com ayaa ka qeyb qaadan kara.
Tani waa goobtii labaad ee tijaabinta-wadidda ee ku taal Sioux City.
Isniintii, Iowa wuxuu ku dhawaaqay 534 kiis oo cusub oo ah COVID-19 iyo afar dhimasho oo dheeri ah oo wadarta guud ee dhimashada 188.
Waxaa jiray in kabadan 9,700 kiis oo cusub.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in boqolkiiba 85% dhammaan kiisaska cusub ay ku yaalliin 22-ka degmo ee wali ku hoos jira xayiraad aad u adag oo ay ka mid tahay Gobolka Woodbury.
Degmada Siouxland Health waxay soosaartay 94 kiis oo dheeri ah kiisaska Woodbury marka la isku daro in kabadan 1,250 iyo labo dhimasho.
Kiisaska la xaqiijiyey ee Gobolka Dakota waxay kor u dhaafeen 1,000 iyadoo 25 xaaladood oo cusub la qaaday. Laba qof ayaa dhimatay.
Nebraska wuxuu arkay tirada kiisaska la xaqiijiyey inay kor u kacayso 6,000 subaxnimadii Isniinta oo laga bilaabo 4,800 Jimcihii.
Waxaa jiray laba dhimasho oo kale oo wadarta guud ahayd 78.
Tirada dhabta ah ee caabuqyada ayaa loo maleynayaa inay aad uga badan tahay tirada kiisaska la xaqiijiyay, in kastoo, maxaa yeelay dad badan ayaan la baarin waxaana daraasado la sameeyay ay tilmaamayaan in dadka ay ku dhici karaan cudurka iyagoo aan dareemin xanuun.
Maalintii seddexaad oo isku xigta, South Dakota ma soo sheegin wax dhimasho ah oo ka timid COVID-19. Labaatan iyo labaatan qof ayaa u dhintay cudurka faafa. Waxaa jiray 21 kiis oo cusub oo la xaqiijiyey in ka badan 2,600.
Dhirta doofaarka ee ku taal Sioux Falls ayaa qaaday tallaabooyinkeedii ugu horreeyay ee ku saabsan dib-u-furista kadib faafitaan ka dhex dhacay shaqaalaha oo ahaa kii ugu xumaa ee dalka.
Smithfield Foods ayaa xidhay warshadda in ka badan laba toddobaad kadib in kabadan 800 oo cudurka qaaday.
Laba waax ayaa laga furay Isniinta warshadda.
Ka dib markii la xirayo afarta maalmood ee warshad hilibka lo'da ee Tyson ee Dakota City ayaa la filayaa inay dib u furmaan Talaadada.
Gobolka Iowa ayaa soo sheegay tiro badan oo ah 740 kiis oo cusub iyo 8 dhimasho ah wadarta guud ee
By Halima Osman • May 1, 2020
Gobolka Iowa ayaa soo sheegay tiro badan oo ah 740 kiis oo cusub iyo 8 dhimasho ah wadarta guud ee 170 dhimasho iyo ku dhawaad ​​7,900 xaaladood oo togan dhammaan.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in kororku uu la mid yahay baaritaanno dheeraad ah oo lagu sameeyo aagagga ay ku sugan yihiin.
Tirada kiisaska togan ee Gobolka Woodbury ayaa kor u dhaaftay 1000 Jimcihi 183 kiis oo cusub.
Degmada Dakota waxay leedahay 164 kiis oo dheeri ah oo wadar ahaan 942.
Laba maalmood oo isku xigta, tirada dhimashada ee Iowa sabab u ah COVID-19 ayaa sii kordhaya
By Halima Osman • Apr 30, 2020
Laba maalmood oo isku xigta, tirada dhimashada ee Iowa sabab u ah COVID-19 ayaa sii kordhaya. Shir jaraa’id subaxnimadii Khamiista, ayuu Guddoomiyaha Gobolka Iowa Kim Reynolds sheegay in 14 qof ay dhinteen. Waa qaddarka ugu badan ilaa bilowgii aafada. Maalin ka hor, gobolka ayaa soo sheegay dhowr iyo toban dhimasho.
Waxaa jira 302 xaaladood oo togan oo cusub oo ka badan 7,100.
Iowa ayaa soo weriyey maalinta ugu dhimashada badan sababtuna tahay COVID-19 iyadoo ay jiraan
By Halima Osman • Apr 29, 2020
Iowa ayaa soo weriyey maalinta ugu dhimashada badan sababtuna tahay COVID-19 iyadoo ay jiraan tobaneeyo dhimasho ah wadarta guud ee ku dhawaad ​​150.
Waaxda Iowa ee Caafimaadka Dadweynaha ayaa kor u qaaday 467 xaaladood oo togan oo dheeraad ah oo ka badan 6,800.
Waxaa jiray 46 kiis oo cusub oo ka dhacay Gobolka Woodbury oo la sheegay subaxnimadii Arbacada in ku dhow 750 gabi ahaanba.
Maalin kadib markii badhasaabyada xaafadaha magaalada Sioux City ay codsadeen in daah furnaan dheeri
By Halima Osman • Apr 28, 2020
Maalin kadib markii badhasaabyada xaafadaha magaalada Sioux City ay codsadeen in daah furnaan dheeri ah laga helo ganacsatada maxalliga ah ee soo tebisa kiisaska COVID-19, Tyson Foods oo ku sugan Dakota City ayaa sheegtay inaysan la wadaagi doonin macluumaadka ku saabsan tirada shaqaalaha saameynta ku yeeshay.
Tyson wuxuu sheegay inay qaadatay talaabooyin lagu difaacayo xubnaha kooxda.
Degmada Dakota waxaa ka jiray 21 xaaladood oo cusub oo ah COVID-19 infekshinka oo dhan 629. Waxaa jira in kabadan 700 oo ka tirsan Gobolka Woodbury.